Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Xuquuqul Insaanka Itoobiya oo Cambaareeyay Taliska Wayaanaha.
Ururka Xuquuqul Insaanka Itoobiya oo Cambaareeyay Taliska Wayaanaha.
Ururka xuquuqda aadamaha ee Itoobiya ayaa soosaaray warbixin aad udheer oo ay kaga hadleen xaalada bini’aadamnimo ee wadanka gumaysiga Itoobiya.
Warbixintan oo aad udheerayd ayaa diirada lagu saaray dhaqanka xun ee ciidanka wayaanaha iyo maamul kusheegyada ka amar qaata taliska wayaanaha, waxaana warbixintan lagu xusay dhacdooyin aad ubadan oo ururku uu cadaymo uhayo.
Ugu horaynba ururka ayaa warbixintiisa ku cambaareeyay dilka, jidh-dilka, xidhayga, boobka iyo kufsiga ay ciidamada wayaanuhu ugaysanayaan dadka shacabka ah ee ku hoos nool xukunka kooxda TPLF.
Warbixinta ururka xuquuqda aadamaha ee Itoobiya ayaa lasheegay in ay indhahooda kusoo arkeen dad maxaabiis ah oo laguha inta laga xidho madaxooda hoos loofoorarinayo iyo waliba qaar kale oo lagu qasbayo faldambiyeedyo aysan shuqul kulahayn.
Sidoo kale warbixintan oo aad udheerayd ayaa lagu sheegay in qolka loogu tala galay 30 qof lagu xareeyo 100 qof taas oo sida warbixinta lagu sheegay keentay dhibaatooyin iyo cuduro xabsiyada kadilaaca.
Warbixinta oo aad looga sooshaqeeyay ayaa lagu sheegay tirada dadka ah ee kaxidhan Gobolkasta oo kuyaalada Oromia iyo Ahmara iyo waliba Gobolka Konso oo kamid ah Gobolada dadkooda aadka loodhibo.
Sidoo kale warbixinta ayaa lagu xusay tirada kaxidhan asxaabta siyaasiga ah oo lagu sheegay tiro aad ubadan, iyo waliba tirada kaxidhan suxufiyiinta iyo dadka arimaha aadamaha u dhaqdhaqaaqa.
Dhinaca kale hay’ada Human Right Warch ayaa sheegtay in jeelasha caalamka ugu liita ay kuyaalaan wadanka Ogadenia halkaas oo ay xabsiyada kujiraan kumanaan shacab ah oo aad udhibaataysan.